Dhaamsa Qabsaa’ota Qeerroo Biyya Keessa Irraa Darbe – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Qabsaa’ota Qeerroo Biyya Keessa Irraa Darbe
Dhaamsa Qabsaa’ota Qeerroo Biyya Keessa Irraa Darbe
Dhaamsa Qabsaa’ota Qeerroo Biyya Keessa Irraa Darbe Kana Dubbisa #Share Waliif.
Nami qabsaa’aa taate, qabsoo deeggartu, injifannoon dhugaan akka dhufu barbaaddu:
1. #TeamLammaa irraa cimsii ofeegi.
2. Namoota garaa garummaa ABO fi KFO akka rakkoo qabsootti lallabanirraa ofeegi.
3. Namoota suuraa qabsa’ota bebbeekamoo kanneen wareegamanii, mana hidhaa jiranii, akkasumas hojii qabsoo kamuu keessatti iddoo olaanaa qabanii irra deddebiin maxxansuun faarsanii hordoftoota baay’ee horatan irraa of eegi.
Isaan duras ammas caasaa mootummaa keecha qofa miti gola hunda jiru. Kaayyoon isaanii afaan damma dibatanii qabsoo Oromoo butuudha. Gaafa injifannootti dhiyaannu humna qaban hundaan as ba’anii isa qabsoo dhugaa baatee asiin ga’etti karra cufu. Keessumaa namni Lammaan nu bilisoomsa jedhee odeessu inni diina Oromoo cimaadhatii irraa fagaadhu.
Warri dhugaadhumaan tokkummaaf jecha gaaffii kana kaasan jiru. Isaan hubachiisuunis hubachuunis salphaadha.
Garuu gareen gurguddaan 2 gaaffii akkasii kaasu farra qabsooti.
A. Warra mootummaarraa mindaa nyaatu, faayidaa daldalaa, kontorobaandiifi gurgurtaa lafaafi kondominiyeemii akkasumas kajeellaa angootiif caasaa mootummaa waliin hidhata qabudha. Isaan kun kaayyoonsaanii bira ga’uuf tooftaan beekamaan yeroo baay’ee fayyadaman Oromoo amantiin, paartiin, lagaafi gandaan qoqqoduudha. Akkuman jedhe baajataafi walitti hidhamiinsa faayidaa dingdeefi taayitaatiin socho’u.
B. Warra mootummaa keessaa, Diyaaspooraa keessaa, aktiivistii alaafi keessaa keessaa wal ijaaree injifannoo dhiigaan argame butuuf of qopheessaa jirudha. Isaan kun ijoollee maqaa ABO fi KFO’tiin ganda keessa yaatutti fayyadamu. Tarii firfaarii maallaqaafi doolaaraa wayiis itti darbuu hinoolani.
Paartilee kanneen keessaas nama ittiin walqunnaman qabu. Mataan garee kanaa baay’een isaanii alaafi keessaa warra OPDOtti maxxananii carraa barnootaa argataniifi maqaa gaarii qabanidha. Yeroo haasa’an mormitoota fakkaatu; garuu gaafa injifannoon dhiyaattu karaa qaxxaamuraan mootummaa faana waliigalanii turruu/firfaarii angoorraa duubatti hinjedhan. Duras arginee jirraa irraa ofeegaa.
Isaan kun sirnaafi sirba adda baasanii hinbeekani. Waanuma namni isaan jaallatan tokko raawwatuufi dubbatu sirrii jedhanii fudhatu. Kan ganama faarsan galgala arrabsu. Gaafa namni isaan jaallatan mootummaa faana dalagu, taayitaa mootummaarra jiru bilisummaa odeessu. Gaafa kaadireen mootummaa walirratti ijaaramee tayitaarraa walgugse gabrummaa odeessu! Isaan kanas yerooma dhiyoo kana argineerra
Lafa qabsoon Oromoo jiru, maal akka hojjatu, eenyu akkamitti akka hoogganu lafarratti homaa hinbeekani. Kara fb odeessanii odeessisiisuun tokkoffaadha. Nama siyaasaa, hayyuufi hooggansa siyaasaa hin dhaggeeffatan, hingaafatan, hinkabajan.
Elaa gareen kun bakka sirbi jiruu shubbisa, lafa gaddi jiruu boo’a. Namni inni jaalatuufi hordofu taayitaa qabannaan qabsoon isaaf dhimmasaa miti. Laga jiraatee, hidhamee dhiisee dantaasaanii miti.
Walumaa galatti garee ayyaanalaallataafi kaayyoo hinqabne calliseema fb kanarraa beekees otoo hinbeekiinis mooraa Qabsoo Oromoo xiqqeessaa, tuffachaa, ummata shakkisiisaa, akkasumas miseensotaafi deeggartoota burjaajessaa oolurraa ofeegaa!
Iyya kara-deemaafi warra miidhaafi bu’aa dhuunfaasaa shallagatee waanuma beekamtiifi interneetii qabuuf wacee waccisiisuu barbaaduu irraa ofeegaa.
Qabsoon Oromoo Sirna qaba.
Qabsoon Oromoo kaayyoo qaba.
Qabsoon Oromoo gaggeessitoota bilchaatoo, amanamoofi ga’umsa olaanaa qaban qaba.
Ibsa Negassa Wegassa
Itoophiyaa Keessatti Qaala’iinsii Mini’aan Nyaataa Dabalaa Deemuun Himame
የሠላም ጊዜ የወልቃይትን መሬት እርስ በርስ ተጠራርተው ይከፋፈላሉ። የጭንቅ ጊዜ ወልቃይት የኢትዮጵያውያን የህልውና ጉዳይ ነው ይላሉ።